ထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များ | USAHello ကနေအလုပ်အရင်းမြစ်များ | USAHello
အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပါ. သငျသညျကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ယူနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလမ်းခရီးအကြောင်းကို Read. သင်လိုအပ်သောအရာကိုလေ့ကျင့်ရေးထွက်ရှာဘယ်မှာသင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေမှုကိုစတင်ရန်.
အမှုအရာအောင်ထုတ်လုပ်နည်းလမ်းများ. အကွောငျး 18% USA တွင်အလုပ်အကိုင်အလုပ်အကိုင်များထုတ်လုပ်နေကြ. ထုတ်လုပ်လုပ်ဆေးပညာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြည်သူ့, ကားများ, နည်းပညာ, သို့မဟုတ်အစားအသောက်. အဆိုပါအဝတ်အစား, တွင်းထွက်သတ္တု, နှင့်ပုံနှိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းလည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်. အများစုကထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များအများဆုံးလုပ်သားတွေကြီးမားစက်တွေလည်ပတ်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့စက်ရုံတွေသို့မဟုတ်စက်များ၌ရှိကြ၏. သို့သော်များစွာသောအခြားအလုပ်အကိုင်များသေးငယ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ရှိကြ၏.
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာအမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်တိုးတက်လာနေသည်. သောကြောင့်နည်းပညာအသစ်များ၏, သင့်ရဲ့အလုပ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားနိုင်. သငျသညျကွိုးစားအားထုနေလျှင်, သငျသညျရာထူးတိုးရနိုင်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်. သင်အမြဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွေ့အကြုံကိုမလိုအပ်ပါဘူး. အတော်များများကအဓိကကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအား On-The-အလုပ်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်း. သူတို့ကကြိုတင်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုသွန်သင်မည်.
စက်လုပ်သမား - တက်သတ်မှတ်နှင့်ထုတ်လုပ်စက်၏စောင့်ရှောက်မှုကြာ. ကျိုးပဲ့စက်တွေနှင့်အတူပြင်ဆင်မှုများကိုအဓိကပြဿနာများ.
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ် - ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူကုမ္ပဏီများဆွေးနွေး. သေချာသူတို့ထုတ်ကုန်များနှင့်အစီအစဉ်များကိုဖြန့်ဝေနှင့်အတူပျော်ရွှင်နေကြသည်ကို.
field ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာရှင် - ပြဿနာများရှိသည်သောဖောက်သည်၏တည်နေရာနှင့်ပြုပြင်မှုများထုတ်ကုန်သွား.
ဂိုဒေါင်တွဲဖက် - အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုသိမ်းဆည်းထားရှိရာဂိုဒေါင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဂိုဒေါင်အပေါင်းအသင်းအလုံအလောက်အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်သေချာအောင်. သူတို့ကစိတျအပိုငျးအမိန့်များနှင့်သူတို့ကို package.
processing စစ်ဆင်ရေး / စည်းဝေးပွဲကို - စိတျအပိုငျးအတူတူထားရန်စက်တွေကိုအသုံးပြုသည်. အဆိုပါစက်များနှင့်ပြုပြင်မှုများအသေးစားစက်မှုပြဿနာများရှငျး. ဤသည်ကောလိပ်သို့မဟုတ်အထက်တန်းကျောင်းပြီးအောင်မပြုခဲ့ကြောင်းလူများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပါသည်.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးရေး - သေချာထုတ်ကုန်အလုပ်ကြောင့်စေသည်, ကြည့်ကောင်းသော, နှင့်အတူတကွညာဘက်ထားကြသည်.
Expeditor: သေချာအရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဖြစ်ပျက်နေသည်ဖြစ်စေခြင်းငှါပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လူများကိုစီမံခန့်ခွဲ. အလုပ်ပိုမြန်ဖြစ်ပျက်စေရန်နည်းလမ်းများထွက်ကိန်းဂဏန်းများ.
Brazer နှင့်ဂဟေဆော်လုပ်ငန်း - အရည်ပျော်, ကွေး, နှင့် tools များနှင့်အတူသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုချိန်ညှိ. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရန်အမေရိကန်ဂဟေဆော်ခြင်း Society ကဆက်သွယ်ပြီးစမ်းသပ်ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
စစ်ဆင်ရေးမန်နေဂျာ - ထုတ်ကုန်မှန်ကန်စွာအတူတကွသွင်းထားကြောင်းသေချာစေရန်မျိုးစုံလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကလူကိုစီမံခန့်ခွဲ. အများစုမှာအလုပ်ရှင်များကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီဂရီရှိသည်သောအလုပျသမားရှာကြသည်.
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနည်းပညာရှင် - အသုံးပြုမှုမီနှင့်စဉ်အတွင်းစက်စမ်းသပ်သေချာသူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာအောင်. အလုပျသမားနာကျင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါစက်တွေတိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းတွေဆုံးဖြတ်ခြင်း. အလုပ်ရှင်များလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးရှာ, ဇီဝဗေဒ, နှင့်ဓာတုဗေဒဒီဂရီ.
တချို့ကထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သငျသညျနေ့ကိုအများစုအဘို့အရပ်နေစေခြင်းငှါ. သင်တို့သည်လည်းညဉ့်နေစဉ်အတွင်းအလုပ်ရှိစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်အလွန်နံနက်စောစော. သငျသညျကောငျးမှအမြင်အာရုံနှင့်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. အတော်များများကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အကိုင်များတနေ့လုံးတူညီသောပုံစံ၌တူညီသောတာဝန်လုပ်နေတာဆိုလို. သငျသညျဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးဆူညံအရပ်ဌာန၌အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မည်.
အတော်များများကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်အကိုင်များအသေးစိတ်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အာရုံကိုပါဝင်ပတ်သက်နေ. သငျသညျအသေးစိတျအာရုံစိုက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်နေထိုင်အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်လျှင်, ထုတ်လုပ်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာအစအသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာလေ့လာသင်ယူလိုသူများအတွက်လူတို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်.
အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ယခင်အတွေ့အကြုံရှိသည်သူကိုအလုပ်ကလူကိုပိုနှစ်သက်. သို့သော်အများအပြားယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပျသမားမြား၏အတိုများမှာ, သူတို့သည်သင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့လေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်.
တချို့ကအလုပ်ရှင်များသငျသညျတခုတွဲဖက်ရဲ့ဒီဂရီရှိသည်ဖို့လိုပေမည် (နှစ်တစ်နှစ်ဒီဂရီ) အချို့သောကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်, ထိုကဲ့သို့သောစက်လုပ်သမားအဖြစ်. အခွားသောအလုပ်ရှင်များသငျသညျတခုအလုပ်သင်လုပ်ဖို့လိုပေမည်. တစ်ဦးအလုပ်သင်သင်အလုပ်အပေါ်လေ့လာသင်ယူနှင့်သင်အပြည့်အဝလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်သည်အထိအများကြီးပေးဆောင်ကြသည်မဟုတ်ဘယ်မှာလေ့ကျင့်ရေးကာလဖြစ်ပါသည်.
များစွာသောစက်ကွန်ပျူတာများအားဖြင့် run ကြောင့်ကောင်းသောကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးဝင်. Khan Academy ကမ်းလှမ်းမှုအခမဲ့အတန်းအမျိုးမျိုးတို့ကို, များစွာသောကွန်ပျူတာ programming သင်တန်းတွေအပါအဝင်.
အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များထုတ်လုပ်-ဆက်စပ်ဘာသာရပ်များအတွက်တန်ဖိုးနည်းကွန်ပျူတာသင်တန်းများနှင့်အပေါင်းအသင်းဒီဂရီပူဇော်. တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ သငျသညျအနီး. အခြို့သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်, သငျသညျသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဒီဂရီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း. သငျသညျအကွောငျးကိုဖတ်နိုင် အင်ဂျင်နီယာထုတ်လုပ်အတွက်ဒီဂရီ.
သင်တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်စင်တာမှာစတင်နိုင်ပါသည်. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့များမှာ. သူတို့ကအကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့အလုပ် applications များနှင့်အတူကူညီ. သူတို့ကအလုပ်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးရန်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်. တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ရှာမည် သငျသညျအနီးစင်တာ.
ဤရွေ့ကားထိပ်များမှာ 10 လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအများဆုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများငှားရမ်းမည်သည့်ကုမ္ပဏီများ. သင်သည်သူတို့၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်:
သင်တို့သည်လည်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးနိုင်သည်. Manufacturingjobs.com ပဲထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်.